Nakhu abantu abashoyo ngememori Foam Spring Matstress Ukubuyekezwa
Incazelo yeKathon CG neKathon CG II: I-chlorhexazoxonone / i-ishoozonone. INJONGO: I-Shampoo, i-conditioner, imikhiqizo yesitayela, i-gel yokugeza, i-sanitizer yesandla, izindlu zangasese, kanye nama-ejenti asebenzayo angaphezulu komhlaba. Sebenzisa amazinga: 0. 1% ngesisindo (njengoba kuhlinzekelwe) kumkhiqizo wokuhlanza (15 ppm a. I., Max); 0. 05% ngesisindo (njengoba kuhlinzekelwe) emikhiqizweni yekhefu (7. 5 ppm a. I., Max).
Ubuye wabuzwa ukuthi ngabe uhulumeni uzobeka kuqala izindawo ezinamanani amakhulu ezihlahla ezinkulu esinyathelweni esilandelayo, okungaba lula ukuphelelwa amandla esivunguvungwini. Kepha uthe ukunquma ukuthi yiziphi izindawo okufanele zihambe ngaphansi komhlaba olandelayo zizoncika kwezinye izinto, kufaka phakathi inani lokuphuma kwamandla endaweni nokuthi le ndawo isezingeni eliphakeme kakhulu-
Inani layo lilingana no-0. 93. Umdwebo 3 libonisa ukuhanjiswa kwezinga lokushisa kwangaphandle kubalwa ngesoftware yokushisa infrared kanye nemephu yokushisa elinganiselwe. Ukufeza ukuqhathanisa okunembe ngokwengeziwe, ukusatshalaliswa kwamazinga okushisa kanye nobude bebha ye-Preminal ekugcineni kwesinyathelo sokupholisa kuboniswa kuMfanekiso4. Njengoba iphutha eliphakeme eliphakeme lingaphansi kwama-5%, singabona ukungaguquguquki okuhle phakathi kokulingisa nokulinganisa.